ဣသရေလအမျိုး၌တစ်ဦးကလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ | Apg29
အေဂျင်စီကိုယ်စားပြုဟမ်ဘာဂါစားသောက်ဆိုင်မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့လူရွှင်တော်ရော်နယ်အောင်နိုင်မက်ဒေါ်နယ်ဖင်လန်အနုပညာရှင် Janie Leinonen ဖွငျ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှု-Miri Regev, ပြတိုက်မှစာတစ်စောင်ကနေတဆင့်အလုပ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါပြတိုက်ငြင်းဆန်ပေမယ့်ပြပွဲအလားအလာထိုးစစ်အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူပြပွဲမှအဝင်ဝမှာကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ထားရန်သဘောတူခဲ့သည်။
ယုန် Leinonen သူ့ဟာသူအဆိုအရသည်သူ၏အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ပြပွဲများတွင် McJesus ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပင်လျှင်စက်တင်ဘာလထဲမှာ Leinonen သူသည်ဣသရေလအမျိုး၏သပိတ်မှောက်ပါဝင်သောကြောင့်အမှုတော်တို့ကိုပြပွဲကနေဖယ်ရှားသင့်ကြောင်းဟုမေးကြသည်။ ငါ့အဘို့, သူတို့ကဝမ်းမြောက်စွာဘုရားကိုလွန်ကျူးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အရ SVT , က "အနုပညာအလုပ်" ခရစ်ယာန်ရာပေါင်းများစွာတို့ကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုများမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အခြားသူတွေအနက်သုံးရဲအရာရှိတဦးတည်းတဦးတည်း firebomb အားဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ။ ဒါဟာအတုသတင်းရှည်လျားသောလမ်းအနံ့။ နောက်တဖန်မွေးဖွားလာခရစ်ယာန်များအားထိုသို့သောအမှုကိုပြုကြတာပါ။
ထို့အပြင်အေဂျင်စီနောက်ဆုံးသြဂုတ်လကတည်းကဟိုင်ဖာထဲမှာအနုပညာပြတိုက်အတွက်ဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်သာယခုရုတ်တရက်ဆန္ဒပြပွဲများ? စီစဉ်ပေးခံရဖို့ပုံရသည်။
မိုဟာမက်ကဲ့ရဲ့သောအခါအမွေးဖွား-နောက်တဖန်ခံရဖို့ကရယူရန်ကြိုးစားခရစ်ယာန်တွေကိုမွတ်စလင်များကဲ့သို့တူညီသောကြသနည်း မိုဟာမက်အားဖြင့်ဆန့်ကျင်သညျယရှေုအကြမ်းဖက်မှုမှပည့်တော်တို့အားပေးခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းအမှု၌, သင်နည်းဗျူဟာတွေအများကြီးလက်လွတ်။
ယရှေုသညျသင်တို့အဘို့အသေခံတော်မူ၏။ သူကသူ့ကိုသတ်ပစ်ဖို့သင်တို့ကိုခေါ်ဘယ်တော့မှ, ဒါပေမယ့်သူကသူ့ကိုယ်သူပေါ်တွင်သင်၏ပြစ်ဒဏ် ယူ. သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုအဘို့အသေခံတော်မူ၏။
သေသူတို့အဘို့အထသောဤသညျယရှေုကိုခံရကြ၏။ သူသည်ယနေ့အသက်ရှင်တော်မူသည်, သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် su သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နေပါသည်!
Vecka 21, torsdag 23 maj 2019 kl. 05:25